Agromart | Agricultural Marketplace Nepal मेवा खेती गर्ने तरिका – Agromart
Q 1. मेवा कस्तो हावापानीमा हुने फलफूल बाली हो?
Q 2. मेवाको वृद्धि र विकासको लागि कतिसम्मको तापक्रम उपयुक्त हुन्छ?
Q 3. मेवाको खेती गर्न वार्षिक वर्षा कतिसम्म हुनु आवश्यक छ ?
Q 4. मेवा खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त मानिन्छ ?
Q 6. मेवाको बिरुवा कुन तरिकाले लगाउन उपयुक्त हुन्छ ?
Q 7. मेवाका बिरुवा कति दूरिमा लगाउँदा उचित हुन्छ ?
Q 8. मेवाको बिरुवा रोप्नु अगाडी कति गहिराईको खाड्ल खन्नु पर्दछ ?
Q 9. मेवाको बगैंचामा सिंचाई गर्न जरुरी छ ?
Q 10. मेवामा मलखादको व्यवस्था कसरी गर्न पर्दछ ?
Q 11. मेवामा कुन कुन बेलामा मलखाद दिँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ?
Q 12. मेवाका बिरुवा बगैंचामा सारिसकेपछि कति समयपछि फूल फुल्न शुरु हुन्छ ?
Q 13. मेवाको बिरुवामा पोथी फूल र भाले फूल कसरी छुट्टयाउन सकिन्छ ?
Q 14. नेपालमा मेवाकाकस्ता-कस्ता जातहरु पाईन्छन्?
Q 15. मेवाको वाशिङ्गटन जातको विशेषता के हो?
Q 16. पुसा जाईन्ट जातको विशेषता चाँहि के हो?
Q 17. पुसा ड्वार्फ जातको विशेषताको बारेमा पनि केहि बताई दिनु हुन्थ्यो कि?
Q 18. मेवाका बिरुवा कसरी उत्पादन गरिन्छ?
Q 19. बीजु बिरुवा उत्पादन गर्ने तरिका बारे बताई दिनु हुन्थ्यो कि?
Q 20. मेवाको बगैंचामा अन्तरबाली लगाउन सकिन्छ ?
Q 21. मेवा फल कस्तो अवस्थामा टिप्नु पर्दछ ?
Q 22. मेवाको अग्लो बोटबाट कसरी सुरक्षित तरिकाले फल टिप्न सकिन्छ ?
Q 23. मेवाको प्रति बोट कतिसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ?
Q 24. मेवा पाक्ने आधारमा कस्तो फलफूल बाली हो?
Q 25. मेवाको फललाई भण्डारण गर्न कस्तो उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ?
Q 26. मेवाको फललाई प्याकेजिङ्गको व्यवस्था कसरी मिलाउनु पर्दछ?
Q 27. भण्डारणको फललाई एकनाससँग पकाउन के उपाय छ?
Q 28. मेवाको फलबाट पेपिन उत्पादन गरिन्छ ?के हो यो पेपिन?
Q 29. पेपिन उत्पादनको लागि छुट्टै जात पनि छन्?
Q 30. मेवामा रोग कीराको प्रकोप कस्तव हुन्छ ?
Q 31. मेवामा लाग्ने रोगहरु कुन कुन हुन् र कुन कुन रोगबाट बढी क्षति पुग्दछ?
Q 32. जरा कुहिने रोग लागेको कसरी थाहा हुन्छ र यसको रोकथाम कसरी गर्नसकिन्छ?
यो रोग ढुसीको आक्रमणबाट हुने हो। रोग लागेपछि जरा कुहिन शुरु गर्दछन् र आक्रमण बढ्दै गएपछि बोट ओइलाएर मर्दछन्। यो रोग बीउ र माटो दुबैबाट फैलिने हुँदा तिनीहरुको बेलैमा उपचार गर्नु पर्दछ। बीउ रोप्नु अगाडी बीउलाई सेरेसन वा क्याप्टानले उपचार गर्नु पर्दछ भने माटोलाई फर्मल्डिहाईड वा कुनै तामायुक्त ढुसीनाशक विषादिले उपचार गर्नु पर्दछ।
Q 33. मेवामा एन्थ्राक्नोज रोगको क्षतिको प्रकृति र रोकथामको उपाय कस्तो छ?
यस रोगको ढुसीले गर्दा फल र पातहरुमा काला धब्बाहरु देखा पर्दछन्। साना फल हुँदै आक्रमण भएमा फलहरु झर्दछन्। फल पाक्ने समयमा आक्रमण भएमा फलको बाहिरपट्टि कालो दाग देखा पर्दछ। बोर्डोमिक्स्चर १%बेला बेलामा छर्दा यस रोगको रोकथाम गर्न सकिन्छ।